यी ५ कारण बढ्दैछ सिभिल बैंकको खराब कर्जा, नियोजित रुपमै डुब्ने ठाउँमा लगानी, ऋणीसँग कर्मचारीकै मिलेमतो !
ARCHIVE, BANKING, COVER STORY, INVESTIGATION, SPECIAL » यी ५ कारण बढ्दैछ सिभिल बैंकको खराब कर्जा, नियोजित रुपमै डुब्ने ठाउँमा लगानी, ऋणीसँग कर्मचारीकै मिलेमतो !
काठमाडौँ - केहि दिनअघि प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार सिभिल बैंकको खराव कर्जा ४ प्रतिशत छ । यो झन्डै अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर हो । अघिल्लो वर्ष खराव कर्जा २.७ प्रतिशत मात्र थियो । यता बैंकको लागत बढेर ६.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो लागत ५.३ प्रतिशत थियो । बैंकको आधार ब्याज दर ११.५९ प्रतिशत छ । सीडी रेसियो ७६ प्रतिशत छ भने स्प्रेड दर ३.४ प्रतिशत छ ।
बैंकमा केहि खराब कर्जा हुनु सामान्य हो । तर सिभिल बैंकको हकमा भने खराब खर्जा सीईओ र अन्य ठुला कर्मचारीकै मिलेमतोमा दिईने र उठाउन पनि नचाहने कारण सिभिल बैंकको खराब कर्जा बढेको हो । आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा सिभिल बैंककै एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार सुरुमै खराव कर्जा भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कमिसनको लोभमा कर्जा प्रवाह गरिएका छन् भने कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुसँग साँठगांठ गरेर खराब कर्जा 'बुक' गरी उक्त रकम वापतको कमिसन लिने गरिएको छ ।
सिभिल बैंककै कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार यी ५ कारण सिभिलको खराब कर्जा अझै बढ्दैछ :
१. 'केहि लोनहरु सुरुमै यो 'ब्याड डेब्ट' हो भन्ने थाहा हुन्छ । तर सीईओ र बैंकका अन्य ठुला कर्मचारी मिलेर उक्त ऋण प्रवाह हुन्छ । यस्तो बेला भ्यालुएटर देखि बैंकको कर्जा विभागका कर्मचारीहरुसमेत को मिलेमतो हुन्छ । अझ गोविन्द गुरुङ जो अहिले सिभिलका सीईओ समेत बनेका छन्, उनी यो काममा खप्पिस छन् । अन्तमा ऋणीहरुसँग उल्टै केहि बार्गेनिङ हुन्छ र उक्त कर्जालाई खराब कर्जा भनेर बुक गरिन्छ ।'
२. 'ऋण उठाउने कर्मचारीहरुको नियत नै हुँदैन । नसक्ने र राजनीतिक पाओर नभएकाहरुलाई मात्र तागेता गरिन्छ । रिकभरी विभाग एकदम कमजोर छ । रिकभरी विभागका कर्मचारी र सीईओ नङ-मासुजस्तै हुनु स्वाभाविक हो र हुनुपनि पर्छ । तर ऋण नउठाउन उनीहरु झन् नजिक बन्छन् ।'
३. ऋण नउठाउन अनेकौं नाटक गरिन्छ । ऋणीलाई जानुपर्ने तागेता पत्रलाई जोकका रुपमा लिईन्छ । कहिले उक्त पत्र हुलाकबाटै फर्काइन्छ, कहिले मिडियाको कार्यालयमा पठाएर नाटक गरिन्छ । यो सब ऋण नउठाउने खेल हो । (सिभिल बैंकको यस्तै घटना केहि समयअघि अर्थ सरोकार डटकमले सार्वजनिक गरेको थियो ।)
४. कम मूल्य पर्ने धीतोलाई जवर्जस्ती बढी भ्यालुएसन गरेर कर्जा प्रवाह गरिन्छ । यसो त सिभिल बैंक यसअघि पनि यसरी नक्कली लालपूर्जा बनाउनेदेखि म्याद नै नागुज्री अरुको नाममा सम्पति सार्ने काम सम्म गरेको प्रमाण बाहिर आएको थियो । यस्तो 'खुरापाती' कामका लागि बैंक अरुभन्दा अगाडी छ ।
५. सिभिलका कर्मचारीसँग 'केहि परे राष्ट्र बैंकले हेर्छ, हाम्रो त जागिर न हो' भन्ने कुराले जडो गाडेर बसेको छ । सीईओको काउन्सिलिङ पनि त्यस्तै छ । 'बैंक यसै पनि धरासायी भइसक्यो, उसै पनि धरासायी भइसक्यो' भन्ने कुरा कर्मचारीले मनन गरेका छन् । मर्जर भएका कतिपय संस्थापनि सिभिलकै पाराका छन् । ऋण उठ्दैन भन्ने जान्दाजान्दै दिईएको ऋण अहिले खराव कर्जा भएको छ । र उक्त भार पनि सिभिलमै थपिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सिभिल बैंक सबैभन्दा 'थर्ड-क्लास', यस्तो छ बैंकको 'बिजोग' वित्तीय अवस्था !
'मानसिक यातना' दिएको अभियोगमा सिभिलका सीईओविरुद्ध मुद्धा दायर हुँदै, रिकभरी विभागका प्रमुखलाई पनि प्रतिपक्षी बनाइंदै !
सिभिल बैंकका सीईओको अर्को दादागिरी, ऋण नलिएका व्यक्तिलाई पठाइएको 'तागेता पत्र' फिर्ता लिन समेत अटेरी !
सिभिल बैंकमा भ्याकेन्सी छ, जागिर छैन ! कर्मचारीको आवश्यकता नाटक मात्रै, भित्रभित्रै सुटुक्क लाग्छ जागिर !
सिभिल बैंकमा उजुरी दर्ता गराउन जाँदा देखियो यस्तो 'भद्रगोल', यति काम पनि गर्न जान्दैनन् सिभिलका कर्मचारी !
अघोषित 'गुण्डागर्दी' गर्दै सिभिल बैंक, बद्नियत पुष्टि हुँदै, 'रिकभरी विभाग' को यस्तो दादागिरी !
सिभिल बैंकको ६१ लाख ऋण प्रकरण, सीईओले मागे माफी, दोषी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता!
सिभिल बैंकको ६१ लाख ऋण प्रकरण, 'रिकभरी' डिपार्टमेन्टका कर्मचारीले उल्टै दिए यस्तो धम्की !
जव लिंदै नलिएको ६१ लाख ऋण तिर्नुस् भनेर सिभिल बैंकले पत्र पठायो...!
सिभिलका नयाँ सीईओको 'किस्सा', मेगाले दिएको गाडीमा र्याल चुहाउँदा प्रहरीमा यस्तो उजुरी !
हेर्नुहोस् सिभिल बैंकले गरेको किर्तेको प्रमाण ! सुचनाको म्याद नै नसकी घर अर्कैका नाममा 'पास' !
सिभिल बैंकमा अर्को 'किर्त काण्ड' : सीइओको मिलेमतोमा राष्ट्र बैंकलाईसमेत झुक्याएर गरियो यस्तो किर्ते काम !
गोविन्द गुरुङलाई सीइओ बनाएपछि सिभिल बैंकमा यस्तो लफडा ! कम्पनी सचिवसमेत हटाउन माग !
श्रीमतीलाई संचालक बनाएर सिभिल बैंकबाट बिदा भए इच्छाराज !
फलोअप : सिभिल बैंकमा 'नक्कली लालपूर्जा' काण्ड ! सीइओकै यस्तो बदमासी !
EXCLUSIVE : सिभिल बैंकमा नक्कली लालपूर्जा बनाउने यस्तो किर्तेधन्दा ! सीइओले खाए लाखौँ रुपैयाँ घुस, ऋणीको उठीबास !
Tags : ARCHIVE, BANKING, COVER STORY, INVESTIGATION, SPECIAL